‘धुर्मुस’लाई छैन भालेको डर, कस्तो होला त ‘जुल्फेको घर’ ? « Mazzako Online
‘धुर्मुस’लाई छैन भालेको डर, कस्तो होला त ‘जुल्फेको घर’ ?
उसो त हाँस्यकलाकार सिताराम कट्टेलले विभिन्न चरित्रहरु निर्वाह गरेर दर्शकलाई पेट मिची मिची हसाँउछन नै । तर सँगै सँगै पछिल्लो समय उनी म्युजिक भिडियो निर्देशनमा पनि ब्यस्त बन्न थालेका छन् । ‘मेरी बास्सै’मा धुर्मुस, मुस्कान पासा, खडानन्द गुरु, खड्काजी लगायत चचित्रहरु निर्वाह गरेका कट्टेलले यसपाली भने निकै भिन्न शैलीको गेटअप बनाएका छन् । कुखुराको भालेबाट निकै प्रभावित भएको हेर्दैमा अचम्म लाग्ने चचित्रको नाम ‘जुल्फे’ हो ।
सिताराम कट्टेलले यो ‘भाले गेटअप’ ४५ मिनेट लामो ‘जुल्फेको घर’ सट फिल्मको लागि बनाएका हुन् । ‘जुल्फेको घर’का मुख्य पात्र ‘जुल्फे’को थेगो पनि अचम्मकै छ, ‘एक्चुअल्ली पंचुअल्ली डिफिसेन्सी सेन्ड्रम’ । यो कस्तो थेगो हो ? त्यो थाहा पाउन त ‘जुल्फेको घर’ रिलिज भईन्जेल कुर्नै पर्नेहुन्छ । तर ‘जुल्फे’को तस्वीरहरु हेर्न भने कुर्नुपर्दैन । हेर्दै फरक देखिने ‘जुल्फे’ सार्वजनिक भईसकेका छन् । जुल्फेको गेटअपलाई सबैले मनपराईरहेको सिताराम खुशी हुदै सुनाउछन् ।
‘मैले अहिलेसम्म गरेको भुमिकाहरु मध्ये सबैभन्दा च्यालेन्जिङ्ग र उत्कृष्ट भुमिका जुल्फे कै हो’, सितारामको भनाई यस्तो छ । किन त ? उनले थपे, ‘यो क्यारेक्टरको हेयर स्टाईल, बोल्ने शैली, टोन र हाउभाऊ सबै कुराले गर्दा जुल्फे भिन्न छ,यो सट फिल्म प्रसारण हुने बित्तिकै सारा केटाहरु भाले कटको दिवाना हुनेछन् ।’
‘बिहान भालेले ‘कुखुरी काँ’ गर्दा जन्मेको कारणले गर्दा जुल्फेले भालेहरुको इज्जतको लागि कपालको गेटअप भालेको झै राखेको हो’, जुल्फे क्यारेक्टरको बारेमा जानकारी गराउदै सिताराम भन्छन् । जुल्फेको शरिरभरि भालेको मात्रै तस्वीर देख्न सकिन्छ, चस्मामा पनि भालेकै स्टीकार टाँसिएको छ । ‘कसैप्रति मतलव नभएको संसारकै टिमुर्केको पात्र हो जुल्फे’, कट्टेल जानकारी गराउछन् ।
‘जुल्फेको घर’मा नायिका ऋचा शर्मा, पत्रकार प्रेम बानियाँ, रमेश अधिकारी, सुरवीर पन्डित, कमला रेग्मी, माधव पण्डित,शान्ति बस्नेत, बसन्त भट्ट लगायतका कलाकारहरुले अभिनय गरेका छन् । ‘जुल्फेको घर’को यतिबेला सुटिङ्ग सकेर धमाधम एडिटिङ्ग भईरहेको छ ।
‘जुल्फेको घर’ सट फिल्म देशभरि प्रोजेक्टरबाट देखाईनेछ साथै असारमा सबै टिभी च्यानलहरुबाट पनि प्रसारण गरिने छ । त्यस्तै ‘जुल्फेको घर’लाई सबटाईटल गरेर लगभग ७० वटा देशहरुमा देखाउने पनि बताईएको छ । ‘जुल्फेको घर’ ह्याबिटेन्ट फर ह्युमानिटी नेपालले बनाएको हो । ह्याबिटेन्ट फर ह्युमानिटी नेपालले स्थानिय स्रोत र साधनको प्रयोग गरि स्थानियहरुकै श्रमदान बाट घर बनाउन सहयोग गर्दै आएको छ ।